Natiijada imtixaanka dugsiyada sare iyo marin habaabinta xisaabeed - Caasimada Online
Home Maqaalo Natiijada imtixaanka dugsiyada sare iyo marin habaabinta xisaabeed
Natiijada imtixaanka dugsiyada sare iyo marin habaabinta xisaabeed
By Eng. Maxamud Xassan Cumar
Sida aan la soconno shalay waxaa lasoo bandhigay natiijadii imtixaanada dugsiyada sare ee sanad dugsiyeedkii 2019/2020. Waxaa jirta in siyaabo kala duwan loo fasiray oo laga taxliiliyay dhinacyo badan natiijada iyo sida ay u kala heleen ardayda Soomaaliyeed ee ku kala sugan gobolada iyo maamul goboleedyada.
Eng. Maxamud Xassan Cumar – Waxa uu ka tirsan yahay MSC Educational Management. – Waxaad kala xiriiri kartaa mahamuud.hassan@gmail.com